Ogaden News Agency (ONA) – Tagesthemen : Lacagaha la siiyo Itobiya oo lagu xidhayo Ilaalinta Xuquuqda Aadnaha.
Tagesthemen : Lacagaha la siiyo Itobiya oo lagu xidhayo Ilaalinta Xuquuqda Aadnaha.
Barnaamijka loogu xiisaha badan yahay TV-ga Jarmalka oo lagu magacaabo –Tagesthemen – ayaa habeen hore lagaga dooday mucaawamada horumarka loogu talagalay ee la siiyo dalka Itobiya oo sida uu sheegay wariyihii daadihinayay barnaamijka ay xukuumadda Itobiya u adeegsato arima siyaasadeed.
Wuxuu yidhi wariyaha waa inay xukuumadda Federaalka Jermalka ku xidhaa taageerada ay siiso Itobiya xaaladda xuquuqda aadanaha. Waxaa kaloo loo baahan yahay buu yidhi wariyaha in loo cadeeyo Wasiirka Maaliyadda Itobiya ee booqashada ku iman doona dalka siyaasadda cusub ee Jermalka ee ku saabsan arimaha xuquuqul Insaanka. Waa inay wada socdaan horumarka dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada iyo xuquuqda siyaasiga ah iyo tan madaniga ahba.
Taasi macnaheedu waa in aan horumar dhaqaale oo kali ah laga hadlin ee xoriyadda siyaasiga ah ee bulshada iyo midda madaniga ahba la tixgaliyo.
Wuxuu yidhi ninka madaxda ka ah xafiiska Human Rights Watch Germany Mr. Michalski Wenzel; “Sanad walba malaayiin Euro ayay dawladda Jermalka horumarka u siisaa Itobiya. Xukuumadda Federaalka Jermalka waa inay u cadeysaa Wasiirka Maaliyadda Itobiya in aanay jiri doonin lacag la siiyo hadaanay wax ka qabanin Xuquuqda Aadanaha”.
Waxaa lagu sheegay barnaamijka warbixintii Human Rights Watch ee cinwaankiisu ahaa; Itobiya: Horumar Xoriyad la’aan ah (” Ethiopia: Development Without Freedom,”). Warbixintaa ayaa lagu sheegay in malaayiin Euro oo loogu talagalay mashaariic horumarineed ay xukuumadda Itobiya u adeegsatay inay ku xoojiso xukunka halka xisbi ee ka jira Itobiya oo lagaga hortago dhaliilihii loo soo jeedin lahaa xukuumadda. Mucaawanada raashinka ee dadka la siiyo iyo adeegyada dawladda intaba waxaa lagu xidhay taageerada xisbiga talada haya ee TPLF, iyadoo shaqaalaha dawladda iyo ardayda dugsiyada loo adeegsado inay ka qayb galaan dacaayadda iyo banaanbaxyada xisbiga taasoo lagu maalgaliyo lacagtii loo siiyay Itobiya in dadka tabaalaysan lagu quudiyo.
Waxaa intaa dheer buu yidhi barnaamijka, waxay xukuumadda Itobiya ka soo horjeedaa saxaafadda xorta ah iyo mujtamaca madaniga ah, waxaana u xidhan dawladda kumanaan arday, shaqaale iyo jaamicyiin ah oo dhaliilo u soo jeediyay dawladda.
Jermalka waxay ka mid tahay dawladaha mucaawanada ugu badan siiya Itobiya. Wariyaha ayaa raaciyay in Wasaaradda Horumarinta iyo Xidhiidhka Dhaqaalaha ee dawladda Federaalka ayixgaliyaan mabda’a cusub ee Xuquuqda Aadanaha, waa in aad loo dabagalaa hadii la cusboonaysiinayo ama kordhinayo mucaawanada la siinayo Itobiya si aan dib dambe loogu adeegsan mucaawanadaa arima siyaasadeed. Sidoo kale wax laga qabto qaanuunka cabudhinta ah ee Itobiya ay ugu talagashay Haya’adaha NGO’s-ka oo laga dalbaa in la soo daayo boqolaalka maxaabiista ah ee siyaasada ama saxaafadda u xidhan.
Wasiirka Maaliyadda Itobiya ayaa shalay booqasho hawleed oo lagaga wadahadlayo arimahaa mucaawanada la siiyo Itobiya ku tagay Jermalka.
western countries have been keeping zenawi in power for many years, and remained there becouse of them…. time has come to show him the attricities he is commiting will not be in the status quo…